Khilaaf Ka Taagan Siyaasiin Loo Diiday Xildhibaanadda | Gedoonline
Khilaaf Ka Taagan Siyaasiin Loo Diiday Xildhibaanadda	Added by Editor on August 17, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho(GMN)-Guddiga Farsamadda xulitaanka Barlamaanka ayaa dib u celiyey magacyadda qaar ka mid ah Siyaasiin ka mid noqon rabay Barlamaanka cusub.
Siyaasiinta Guddiga uu dib u celiyey ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen qab-qabliyaashii Dagaal ee dalka soo maray kuwaas oo aan buuxin Karin sharuudaha loogu baahan yahay xildhibaanka soo socda.
Magacyadda Guddiga ay diideen inay qabtaan waxaa ka mid ah ,Cabdullaahi Shiikh ismaaciil, Cabdiraxmaan Ibbi, C/casiis Shiikh Yusuf.
Guddiga Farsamadda ayaa ayaa horey u diidey magacyo ay ka mid ahaa Maxamed Qanyare Afrax.
Siyaasiintan Guddiga uu celiyey ayaa sababay khilaaf soo kala dhexgalay Beelaha soo xulay Magacyadda iyo Guddiga Farsamadda.
Madaxwaynaha oo diiday Magacyadda Liiska Xildhibaanadda
Shariif oo la weeray Liiska Magacyadda Xildhibaanadda
Shariif Xasan oo Barlamaanka u diiday inay kulmaan
Cabdiwali oo ka walacsan Xildhibaanadda cusub
Guddiga Farsamadda iyo Odayaasha oo gacan ka hadal dhexmaray
One Response to Khilaaf Ka Taagan Siyaasiin Loo Diiday Xildhibaanadda	Tanadeh August 17, 2012 at 5:46 am	Sheekh Shariif ba waxaa uu ahaa hoggaamiye kooxeed. Waayo asaga loogu oggolaaday?